Extra-sakany Extrusion Coating & Lamination Machine - China Qingdao Shicheng Plastic
coating & lamination milina fanontam-pirinty sy ny milina
plastika birao sy ny taratasy ...
coating & lamination ...
Extra-sakany Extrusion Coating & Lamination Machine
Classicx Series Extra-sakany Extrusion Coating sy Laminating-dalana, dia namboarina, famokarana avo tapaky ny volana sy hi-milina farany natao ny FEEC. Ny milina dia natao sy fikarohana ny efa mandroso ny teknolojia, mampiasa PE / PP ho akora ho mifono plastika laminated amin'ny lamba voatenona. Izany dia avo-fampisehoana fitaovana ho an'ny famokarana fanampiny manerana lamba vokatra. Applications: Efa namokatra be nampiasaina fanampiny manerana plastika lamba tenona sunshade toy ny lamba, labasy, rano-porofo lamba, Geo ...
Classicx Series Extra-sakany Extrusion Coating sy Laminating-dalana, dia namboarina, famokarana avo tapaky ny volana sy hi-milina farany natao ny FEEC. Ny milina dia natao sy fikarohana ny efa mandroso ny teknolojia, mampiasa PE / PP ho akora ho mifono plastika laminated amin'ny lamba voatenona. Izany dia avo-fampisehoana fitaovana ho an'ny famokarana fanampiny manerana lamba vokatra.
Izany no be mpampiasa fa namokatra fanampiny manerana plastika lamba tenona sunshade toy ny lamba, labasy, rano-porofo lamba, geotextiles, andraikitra mavesatra-fonosana lamba, Flex faneva, sns Maximum sakany dia mety ho hatramin'ny 6200mm.
Customization malefaka afaka hihaona samihafa fitakian'ny mpanjifa.
Ny milina mandany extruder ambony-karazana, ary mety hanaraka rafitra isan-karazany araka ny fepetra vokatra isan-karazany.
Extruder roa sy ny fahamaiton'ny taretra rongony, maty dia afaka hanatratra lafiny roa laminating tamin'ny dingana iray;
Mety ho fitaovana amin'ny lafiny roa-squeezer sy fanamainana toy ny safidy ho an'ny famokarana ny rano-efitra lamba fiaramanidina vokatra.
Corona treater sy ny fanontam-pirinty venty no safidy ho an'ny vokatra izay mila famantarana sy ny fomba fanontam-pirinty rehefa avy laminating
Ny fizarana lamination azo fitaovana telo-roller calender, dia mety ho famokarana malalaka fanitso amin'ny max. hateviny hatramin'ny 3mm;
Laminating haingana dia afaka tonga 150m / min araka ny mpanjifa fepetra takiana.
Lamination Width MG 2500-3100 3600-4100 3000-4300 5000-6100
Lamination hateviny à 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10
Mechanical-dalana, Speed m / min 20-200 20-200 20-150 20-200
Sokiro Diameter, L / D MG Φ120 × 33 Φ150 × 33 Φ180 × 33 Φ200 × 33
Roller Length MG 3200 4200 4500 6200
T-Die Lip Length MG 3250 4250 4600 6250
Max.Unwind / Rewind horonan-taratasy Diameter MG 1200 1200 1200 1200
Air Ny fihinana M 3/ min 0.8 1.0 1.2 1.2
hihena Water M 3/ min 0.8 1.0 1.2 1.2
Line Size (L × W × H) M 12 × 18 × 4.5 14 × 20 × 4.7 14 × 22 × 5 15 × 23 × 5
Next: Milina fanontam-pirinty efatra loko
Coating Ary Lamination Extrusion-dalana,
Coating Ary Lamination-dalana,
Coating Ary Lamination Machine
Coating Ary Lamination milina
Coating Ary Lamination Production-dalana,
Extra-Sakany Extrusion Coating Ary Lamination Extrusion-dalana,
Extra-Sakany Extrusion Coating Ary Lamination-dalana,
Extra-Sakany Extrusion Coating Ary Lamination Machine
Extra-Sakany Extrusion Coating Ary Lamination milina
Extra-Sakany Extrusion Coating Ary Lamination Production-dalana,
Extrusion Coating Ary Lamination Extrusion-dalana,
Extrusion Coating Ary Lamination-dalana,
Extrusion Coating Ary Lamination Machine
Extrusion Coating Ary Lamination milina
Extrusion Coating Ary Lamination Production-dalana,
Milina fanontam-pirinty efatra loko